Wmv in Android - Sida loo Play wmv on Android Phone
Qaab file wmv waa mid aad loo jecel yahay, laakiin ma aha qaab Android-friendly. Nasiib wanaag, weli waxaa jiro qaar ka mid ah siyaabaha ay u Radidiyaha faylasha wmv on aalad Android-ku-saleysan. In this article, waxaana ku qoran laba siyaabood oo kaa caawinaya in aad u daawato wmv videos aad ku qalab-ku-saleysan Android aan ka kaaftoomi kasta.
Habka 1: Beddelaan wmv u soo gudbin in qaab Android-socon
Habka 2: Ku rakib ah ciyaaryahanka Android wmv free
Raadinayo si ay u daawadaan faylasha wmv labada telefoonka ah Android ama kiniin ah? Waxaad inaan hore u badalo in ay qaab Android-socon. Si in, waxaad isku dayi kartaa soo MobileGo Wondershare (Windows). Waxay awood u aad si loogu badalo iyo wareejiyo file wmv ah in telefoonka ah Android ama kiniin ka computer oo aan ku xirid ah. Intaa waxaa dheer, haddii aad jeceshahay si ay u gudbiyaan kale barnaamijyadooda, xiriirada, SMS, muusig iyo sawiro u gurmad ah ama soo celiyo wax walba oo wax ku ool ah oo ku haboon, barnaamijkan shaki la'aan waa mid caawisa oo ku wanaagsan aad.
Download barnaamijka in ay bartaan sida ay noqon doontaa in aad si aad u daawato file wmv ah qalabka Android ku salaysan awood.
Tallaabada 1. Isku telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka
Ku rakib oo ay maamulaan MobileGo for Android. Ka dib markii in, ku xidhi telefoonka Android ama kiniin in PC ka via WiFi ama cable USB ah. Barnaamijka waxaa lagu ogaan doonaa telefoon ama kiniin si toos ah.
Tallaabada 2. Transfer wmv in phone Android ama kiniin
Waxaad qabsato karo tayada video ah b shaandhaynta diinta iyo wareejinta file wmv ah . By riixaya icon labaad ee dhinaca kore ee midig ee interface ah, waxaad heli doontaa menu hoos-hoos ah. Riix Dejinta si ay u helaan suuqa kala goobta. Daaqadda goobta, dooro haddii aad jeclaan doonaa si loogu badalo video ee sare, sida caadiga ah ama hooseeyo tayo leh sida aad jeceshahay. Tayada sare waxay qaataan doonaa adeeggan oo aad telefoon Android ama kiniin iyo diinta ka qaadi doono yara dheer.
In ay leeg- navigation dhinaca bidix ee interface ka ah, u tag Videos . Daaqadda video ah, guji dar ka dibna dooro videos aad jeclaan lahaa inuu u ciyaaro telefoonka Android ama kiniin. Marka aad suuqa kala pop-up kuu sheegaysa in videos wmv aad ku daray ma taageersana, waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad jeclaan doonaa si ay u badalo. Riix Haa . Markaas, barnaamijka ku bilaaban doono si loogu badalo ka videos wmv in qaab Android-socon, kaas oo noqon doona file MP4 ah sidii qaab wax soo saarka aad.
Fiiro gaar ah: Ka sokow ciyaaro file wmv ah telefoonka Android ama kiniin ah, waxa kale oo aad tahay si loogu badalo iyo awood ku raaxaysan files in uu kaydiyaa FLV ah, AVI, MOV, MKV iyo wax ka badan .
Hadda, faylka wmv gediyay ma uu badbaadeen rogtid oo aad telefoonka Android ama kiniin.
Sida aad arki karto, waa wax sahlan in Radidiyaha file wmv ah ee aad taleefan Android ama kiniin ah marka aad leedahay Android wmv Player . Ha sugin agagaarka dambe! Bilow diinta aad rabtaa wmv oo ay ku riyaaqaan on go ah.
Fadlan daawado tutorial video hoose si fiican loo fahmo.
Isku day MobileGo for Android hadda! Waxaad dhab ahaan doonaa ceeboobi maayo!
Haddii aad rabto in aad si aad u daawato video wmv ah qalabka Android adiga oo aan diinta file ah, waxaad ku rakibi kartaa ciyaaryahan Android wmv lacag la'aan ah. Thanks to ku dhiirigelinayaan in uu, hadda waxaa jira ciyaartoy badan oo Android laga helo suuqa. The Wondershare Player u Android hubaal taagan iyaga ka mid ah. Sidaa daraadeed, ma aha oo kaliya in aad ka files wmv, laakiin sidoo kale kale qaabab video caan ah sida AVI, FLV, MKV, VOB, MOV, TS, M2TS iyo wax ka badan oo leh dhib ma ciyaari karo. Hadda download it ama sahamin muuqaalada more of this ciyaaryahan Android awood badan naftaada!
> Resource > Android > Sida loo Play wmv on Android Phone